समृद्धिका लागि खेलकूद, चार विधाको पुरस्कार राशिमा वृद्धि | suryakhabar.com
जनताका आधिकारमाथि जबर्जस्ती अंकुश लगाए सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्छौंः सभापति देउवा
Home खेलकुद समृद्धिका लागि खेलकूद, चार विधाको पुरस्कार राशिमा वृद्धि
समृद्धिका लागि खेलकूद, चार विधाको पुरस्कार राशिमा वृद्धि
on: May 19, 2019 In: खेलकुद, गण्डकी प्रदेशTags: No Comments
कास्की । ‘समृद्धिका लागि खेलकूद’ नाराका साथ पोखरामा आयोजना हुने ‘टिभिएस अपाची चौथो पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड’ का चार विधाको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरिएको छ । स्पोर्टस् अवार्ड आयोजक खेलकूद पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले पुरस्कार राशि वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पोखरा स्पोर्टस् अवार्डअन्तर्गत वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उदीयमान खेलाडी र खेलकूद सङ्घसंस्था अवार्डको पुरस्कारको राशि वृद्धि गरिएको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए। उनीहरुलाई जनही रु २५ हजार पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । अघिल्लो संस्करणमा उक्त पुरस्कारको राशि रु १५ हजार रहेको थियो । यसपटक एकरएक थान मोबाइलसमेत प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तै वर्ष उत्कृष्ट खेलकूद पत्रकारिता अवार्डको राशिमा रु पाँच हजार वृद्धि गरी रु २० हजार पुर्‍याइएको छ । स्पोर्टस् अवार्ड यही जेठ २४ गते पोखरा सभागृहमा प्रदान गरिनेछ । यसपटक लोकप्रिय खेलाडी अवार्ड विधासमेत थप गरिएको छ । सो विधाका लागि खेलाडी छनोट एसएमएसमार्फत गरिने मञ्चका महासचिव विजय नेपालले बताए । सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने खेलाडीलाई रु २५ हजार पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
लुम्बिनीमा अर्को वर्ष ‘वैशाख डे’ मनाउनुपर्छ: प्रधानमन्त्री
पोखरा फुटबल रङ्गशालाको ४० प्रतिशत काम
१५ हजार रोपनीे जग्गा अतिक्रमण
गायिका अनिता सुब्बाको जिन्दगी गीत सार्वजनिक
मन्त्रीलाई समेत सक्रमण भएको डेंगु लागेमा के गर्ने? के नगर्ने? अनि कसरी बस्ने? डाक्टरको सुझाव
पाल्पामा डेङ्गुका बिरामी थपिदैँ